Khiqiza ukukhishwa kwamakhowe we-premium wekhwalithi ephezulu, isb. Kusuka ku-chaga, reishi, psilocybe cubensis (amakhowe omlingo), umhlwenga wengonyama, ama-maitake, nezinye izinhlobo eziningi zamakhowe zisebenzisa isizinda se-ultrasonic. Indlela yokukhipha emnene ye-ultrasound yamandla ingahlanganiswa namakhemikhali awuthola aqinisekiswe ngokomzimba (i-bio-certified / eco-certified) njenge-bio-ethanol noma ngamanzi ahlanzekile. Ngaleyo ndlela, isizinda se-ultrasonic sivumela ukulungiswa kwemikhakha yemvelo yamakhowe yemvelo ngokuphelele. Ilungele umthengi, ilungele imvelo!
Okukhishwe Ngokwemvelo Okugcwele, Okungokwemvelo Kwamakhowe nge-Ultrasonic Extraction
Ama-extractors e-Hielscher ultrasonic asetshenziselwa kabanzi ukukhiqizwa kokuhweba kwama-bioactive compounds avela kuma-botanicals namakhowe. I-Ultrasonication iyinqubo yokukhipha emnene, engeyona eshisayo esebenza kumgomo wamandla we-sonomechanical afana ne-shear, turbulences, kanye nokwehluka kwengcindezi. Lawa mandla e-sonomechanical aphula ukwakheka kwamaseli wamakhowe futhi akhulule izingxube ze-bioactive ezivela ngaphakathi kweseli ziye ku-solvent.
Inqubo yokukhipha ye-ultrasonic uqobo ayangezi noma yimaphi amakhemikhali futhi ayiguquli ukukhishwa. Kusetshenziswa izincibilikisi ezivunyelwe ukukhiqizwa kwemikhiqizo ephilayo njengamanzi ahlanziwe noma i-bio-ethanol, kwenza i-sonication ibe yindlela ekahle yokukhipha okokukhishwa kwemikhowe yemvelo ngokuphelele. Ngakho-ke, isizinda se-ultrasonic siyindlela esebenza kahle kakhulu, esheshayo, ephephile futhi eluhlaza yokukhiqiza ama-premium quality extracts, angaqinisekiswa njengomkhiqizo we-organic (ie, bio-Certified or eco-certified).
umshini we-ultrasonic I-UIP2000hdT (2kW) ekukhiqizweni kokukhishwa kwemvelo yamakhowe ngokwemvelo.
Ungayikhiqiza Kanjani Imvelo Ephelele Yemvelo, Ye-Organic Mushroom nge-Sonication
Isizinda se-Ultrasonic sisebenzisa amakhowe akhule ngokwenyama kanye ne-solvent engeyona enobuthi (isb., I-bio-ethanol, i-organic-Certified alcohol noma amanzi) kuyindlela esebenza kahle kakhulu futhi esimeme yokukhiqizwa kokukhishwa kwemakhowe okwemvelo ngokuphelele.
Imiyalo Yesinyathelo Ngesinyathelo Yomkhiqizo We-Ultrasonic we-Organic Mushroom Extract
Ngokukhipha amakhowe we-organic, ungasebenzisa noma yiluphi uhlobo lwamakhowe akhuliswe ngokwemvelo noma avunwa ngokwemvelo afana ne-psilocybe, chaga, mane wezingonyama, ama-maitake, i-reishi, i-cordyceps, umsila we-turkey, i-polyporus, i-phellinus, i-oyster mushroom njll.
Khetha i-solvent eqinisekiswe ngokomzimba efana ne-bio-ethanol / bio-alcohol noma amanzi ahlanziwe. Ukukhishwa okuyizinyathelo ezimbili ngokukhishwa kwamanzi esinyathelweni sokuqala nokukhishwa kwe-ethanol njengesinyathelo sesibili kunikeza ukukhishwa okubanzi okubanzi. Ukukhishwa kwamanzi futhi kuncibilikise amakhemikhali e-phytochemical non-polar amakhowe, ngenkathi i-ethanol ikhipha futhi inyibilikisa amakhompiyutha e-polar bioactives.
Isinyathelo-by-Isinyathelo Protocol Sokukhiqizwa Kwe-Ultrasonically Ngokugcwele Kwemvelo, i-Organic Mushroom Extract
Ukuze uhlukanise okukhishwa okugcwele okugcwele okuvela kumakhowe, kusetshenziswa umthetho olandelanayo wezinyathelo ezimbili usebenzisa i-power ultrasonics. Ukukhishwa kwamanzi kuyindlela elula kakhulu futhi emnene yokukhipha nokugxilisa izingxube ze-bioactive ezivela kumakhowe. Ukusetshenziswa okuhlanganisiwe kwe-ethanol namanzi kusetshenziswa ikakhulukazi lapho amanye ama-bioactive phyto-chemical akukhowe engancibiliki amanzi, isb, ama-triterpenoids.
Okuqukethwe: Amakhowe omisiwe (100g) achotshozwa abe izingcezu ezincane ze-approx. 1,3cm2 (0.5×0.5 amayintshi). Impahla yamakhowe e-chrushed ibekwa ku-1.5L glass beaker.
Isinyathelo: Isizinda se-Ultrasonic Cold: Amakhowe omisiwe, omisiwe amisiwe ku-1000 mL ka-60% ethanol emanzini ahlanziwe noma acolisisiwe (v / v; 60% ethanol: 40% amanzi) ngokufaka ingxube ye-solvent ku-glass beaker enamakhowe . Ukukhipha, kusetshenziswa i-ultrasonic extractor UP400St efakwe i-sonotrode S24d22L2D. Uphondo (sonotrode) lwe-ultrasonicator lubhajiswa ekumisweni kwamakhowe kanye ne-solvent. Ukusetshenziswa kwesidlakudla kungakhethwa, kepha kungasiza ukuhambisa izinhlayiya zezitshalo ngokufana ku-sonotrode. Qiniseka ukuthi i-sonotrode ayizithinti izindonga ze-beaker. Setha i-amplitude ibe yi-100% bese uyihlanganisa nge-approx. 10 imiz. I-UP400St iza nenzwa yokushisa engaxhuma. Xhuma i-thermocouple ne-ultrasonicator bese ufaka inzwa ekumisweni. Kumenyu yedijithali yedivayisi ye-ultrasonic UP400St, ungasetha umkhawulo wokushisa ophezulu. I-ultrasonicator izomisa isikhashana lapho lokhu kufinyelela kokushisa kufinyelelwa futhi kuqala ngokuzenzakalela ngokushesha lapho ukumiswa sekufinyelele kunani eliphansi le-set ∆T. Amanani ama-valuesT anconyiwe asondele. 30 ° C njengoba phezulu no-20 ° C njengenani eliphansi lokushisa. Ukusetshenziswa kokugeza kwamanzi noma kweqhwa kusiza ukugcina izinga lokushisa ngesikhathi se-sonication liphansi. Ngemuva kwe-sonication, okuqinile kwamakhowe kususwa ngokuhlunga nangokucindezela. I-solvent enamakhemikhali e-phyto akhishiwe ibhekana nokuhwamuka komshini noma i-rotor-evaporation ukuze ekugcineni ingxenyana yamakhowe etholakala ekukhishweni kwe-ethanol. Izinsalela zamakhowe ezisalayo zingasetshenziselwa isinyathelo sokuzikhethela sesibili, isizinda esishisayo se-ultrasonic.
Isinyathelo (kuyakhetheka): Isizinda Esishisayo se-Ultrasonic: Okusuka kokukhishwa kokuqala okubuyiselwe okusetshenzisiwe kwamakhowe kusetshenziswa esinyathelweni sesibili sokukhishwa okushisayo kwe-ultrasonic ukuhlukanisa ingxenyenamba yamaphytochemicals asele kumakhowe. Izinto zefungus zifakwa kwi-glass beaker, ama-600mL we-60% ethanol entsha: isisombululo se-solvent samanzi esingu-40% siyangezwa futhi sishisiswe ukuze sifinyelele. 70 ° C. Ngesikhathi se-sonication, izinga lokushisa lingakhuphuka lifike kuma-95 ° C. Ukushisa okungeziwe kukhuthaza ukukhishwa kwama-phytochemicals asalayo. Njengoba cishe wonke amakhemikhali azwela nge-thermo akhishwe ngaphansi kwezimo ezilawulwa ngokushisa ngokweqile kusinyathelo 1, lesi sinyathelo sesibili singasetshenziswa ngokuzithandela ukudala okukhishwe okuqinile, okuphelele kuwo wonke ama-phytochemicals ekhowe. Ukumiswa kunikezwe i-UP400St ngendlela efanayo naleyo echazwe ngenhla. Hlunga, cindezela futhi uhlukanise amakhowe kokukhishwa kwamanzi. Ama-phyto-constituents akhiphe okwesibili nawo ahlukanisiwe ngomhwamuko.
Kokubili izingxenyana ezikhishwa amakhowe, kusuka ekukhishweni okubandayo nokushisayo, kuhlanganiswe ndawonye ukuze kutholakale okukhishwa okuphelele kwamakhowe. Lokhu kukhishwa kungenziwa ngemikhiqizo ehlukahlukene njengoketshezi, amaphilisi noma imikhiqizo edlayo.
Le nqubo iqondakala ngokuphelele kunoma iyiphi enye ivolumu. Ukufaka imingcele efanayo ye-ultrasonic (umfutho we-ultrasonic Ws / L, ingcindezi, izinga lokushisa, okuqinile: ukuminyana oketshezi), yonke imiphumela esivele isunguliwe yokukhishwa kwamakhowe e-ultrasonic ingamane ikalwe kumanani amakhulu (noma amancane) ngenkathi izuza imiphumela efanayo (okusho isivuno, inqubo yokusebenza kahle).
umshini we-ultrasonic UP400St ekukhiqizweni kwama-organic mushroom extracts.
Uyacelwa uqaphele ukuthi imizimba yezithelo zamakhowe, okungukuthi, i-basidiomycete, iqukethe inani eliphakeme kakhulu lama-beta-glucans kanye nama-triterpenoid kune-mycellium ekhule kwi-substrate yokusanhlamvu. Ngenkathi isizinda se-ultrasonic siyindlela esebenza kahle kakhulu yokukhipha, ukukhetha izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme kungenye into ebalulekile ethonya ukwakheka kokukhishwa. I-Ultrasonication ingakhipha kuphela izinhlanganisela ezikhona entweni eluhlaza. Umzimba othelayo wamakhowe udlule kuzo zonke izigaba zokuthuthuka futhi ngakho-ke uqukethe inani eliphakeme kakhulu lamakhemikhali aphefumulayo. I-mycellium yisigaba senqubo yokukhula nokuvuthwa kwamakhowe ngakho-ke inokunye ukwakheka kwama-phyto-nutrient. I-substrate lapho kutshalwa khona amakhowe kuthonya izithako zokuphilayo, futhi.
Isizinda se-Ultrasonic sikhipha amakhemikhali e-bioactive njenge-polysaccharides (β-glucans), i-terpenoids, i-triterpenes, i-indoles (isb., I-tryptamines) namanye ama-alkaloid kanye nezinye izinto eziningi ezikhuthaza ezempilo nezokwelapha kahle.
Isibonelo, i-psilocybin ne-psilocin zikhishwa nge-ultrasonically kukhowe le-psilocybe cubensis. Zombili izinhlanganisela, i-psilocybin ne-psilocin, zaziwa ngemiphumela yazo ye-hallucinogenic.
Ukukhishwa Kwe-Ultrasonically Okugcwele Okukhishwe Amakhowe Wekhowe
Amakhowe acebile ngamakhemikhali amaningi we-bioactive kanye nama-micronutrients. Ngaphandle kwama-polysaccharides nama-triterpenes, amakhowe aqukethe imicu yokudla, i-polyunsaturated fatty acids (i-PUFA), amaprotheni, ama-amino acid, i-keto acid, amaminerali, amavithamini e-antioxidative (isib. ama-anthocyanidins, amaminerali, izakhi zokulandela ngomkhondo namanye ama-phyto-chemical anempilo.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Mushroom Extraction
Ikhwalithi ephezulu – isb. imikhiqizo eqinisekiswe ngokomzimba
Isizinda se-Ultrasonic mushroom singaqhutshwa ngenqwaba nokusebenza kokugeleza okuqhubekayo. Umdwebo ukhombisa okukhipha i-ultrasonic I-UIP4000hdT ngokugeleza kweseli.
Izinsiza ze-Ultrasonic ze-Production Mushroom Extracts
I-Hielscher Ultrasonics idizayina futhi yenze ama-extractors e-ultrasonic ekukhiqizeni ama-phytochemicals asezingeni eliphakeme njengokukhishwa kwamakhowe. Njengoba isizinda se-ultrasonic kuyindlela emnene, engeyona eyokushisa, esebenza ngokusetshenziswa kwamandla we-sonomechanical, amandla e-ultrasound afaneleka njengenqubo yokukhipha ekhethwayo yokukhipha okusebenzayo nokusheshayo kwamakhemikhali e-bioactive kusuka kuma-botanicals. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angasetshenziswa kalula ekwenzeni ama-mushroom akhiqizwe aqinisekisiwe. Ama-solvents avunyelwe ekukhiqizeni okuqinisekisiwe okufana ne-bio-ethanol, i-organic-certified alcohol noma amanzi ayahambisana nezinqubo zokukhishwa kwe-ultrasonic futhi angaholela ekukhishweni okuphelele kwama-phyto-compounds atholakalayo. Isizinda se-Ultrasonic singaqhutshwa nganoma yiluphi uhlobo lwamakhowe kanye nezithelo ngekhwalithi ephezulu yokukhipha.
Izinsiza kusebenza Zokukhishwa Kwamakhowe Ezindala
Iphothifoliyo yomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele lwe-extractors ephezulu ye-ultrasonic kusuka ezincane kuya ezinkulu. Izesekeli ezingeziwe zivumela ukuhlangana okulula kokucushwa okuhle kakhulu kwedivayisi ye-ultrasonic yenqubo yakho yokukhipha amakhowe. Ukusetha okulungile kwe-ultrasonic kuya ngomthamo ocatshangelwe, ivolumu, impahla eluhlaza, inqubo ye-batch noma i-inline kanye nomugqa wesikhathi. Abasebenzi bethu abanesikhathi eside benolwazi futhi beqeqeshwe kahle bakusiza ngokubonisana.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher yimishini esezingeni eliphezulu equkethe ukubonisa umbala kwidijithali ukuze kube lula, ukusebenza okusebenziseka kalula. Ukuhlelwa kwe-Sonication kungasethwa kusengaphambilini futhi kulondolozelwe ukugijima okuphindaphindiwe ngaphansi kwemingcele yenqubo efanayo. Isilawuli kude sesiphequluli sivumela ukusebenza kwesilawuli kude nganoma yisiphi isiphequluli se-inthanethi kusuka noma ikuphi. Lokhu kukuvumela ukuthi ubheke futhi usebenze i-ultrasonicator yakho noma kunini kusuka noma yikuphi. Yonke imingcele yenqubo ye-ultrasonic irekhodwa ngokuzenzekelayo ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuyekeze futhi ulawule izilungiselelo zokusebenza nemiphumela yekhwalithi.
Amakhasimende akwa-Hielscher avela emhlabeni wonke aneliseke kakhulu ngokuqina nokusebenziseka kalula kwama-ultrasonicators ethu.
Funda kabanzi mayelana ne-Hielscher ultrasonic extractors ukuxhumana nathi manje. Gcwalisa ifomu elingezansi ukuthola eminye imininingwane, amanothi wesicelo kanye namanani noma usishayele ukuxoxa ngenqubo yakho yokukhipha!
Amakhowe okwelapha kanye nama-Bioactive Compounds awo
Amakhowe aqukethe amakhulu ezinhlanganisela eziphilayo, ezinikeza izakhiwo ezihlukile njengokukhuthaza ezempilo, ukulwa nokuvuvukala, amasosha omzimba asekelayo, noma imiphumela yokwelapha. Amakhowe ambalwa afana ne-psilocybe cubensis (nawo amakhowe omlingo noma ama-shrooms) aziwa ngemiphumela yawo yengqondo kanye ne-hallocinogenic.
Reishi (IGanoderma lucidum) iqukethe i-ganoderic acid, i-ganoderiol, i-ganodermanontriol, i-polysaccharides, i-triterpenes, i-polyphenols, amaprotheni nama-amino acid.
I-Lion's Mane (I-Hericium erinaceus) icebile kumakhemikhali e-phenol-analogous, ama-hericenons erinacines, ama-hericerins, ama-resorcinols, ama-steroids, i-mono-terpenes, i-diterpenes, i-heteroglycan peptide, ne-b-1,3 branched-b-1,2-mannan.
Umsila weTurkey (eyaziwa nangokuthi iTrametes versicolor, iCoriolus versicolor nePolyporus versicolor) icebe kakhulu kwi-krestin ye-polysaccharide-K (PSK) eyaziwa ngokuthi ngumgqugquzeli oqinile wamasosha omzimba. Ngaphezu kwalokho, umsila we-turkey ubalulelwa ngamakhompiyutha awo we-coriolan (b-glucanprotein complex).
Chaga (Inonotus obliquus) yaziwa ngamakhompiyutha ayo anamandla, okuyi-bD-glucans, mannogalactoglucan, sterols, kanye ne-triterpenes.
Izinhlobo ze- umagazine amakhowe (isb. P.cubensis, P. samuiensis, P. Mexicana) adliwa kakhulu ngezinto zawo ze-hallucinogenic psilocybin ne-psilocin: 4-hydroxy- dimethyltryptamine.